आफ्नै मूल्याकंन गरौं – erupse.com
आफ्नै मूल्याकंन गरौं
पछिल्लोपटक देशमा निकै उचालिएको विषय हो आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा चितवनमा दर्ता भएको मुद्दा । टेलिभिजन प्रस्तोता रबि लामिछानेको प्रसंगमा निकै हल्लाखल्ला भयो । सामाजिक सञ्जालहरुमा रबिबाहेक अन्य प्रसंग नै देखिएन । तर, पनि राज्यको निकायले गरेको अनुसन्धान अनि त्यसबाट भएको अग्रगामी गतिविधिलाई पनि पक्कै आत्मसात गर्नु नेपाल राज्यभित्र बस्ने आम नागरिकको कर्तव्य पक्कै हो । नागरिकहरु कसैको पनि बहकाउमा लाग्नुभन्दा पनि घटना, त्यसको प्रकृति अनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेरै अगाडि बढ्नु उत्तम हो । तर पनि कहीँ कतै कसैको बहकाउमा लागेर अगाडि बढ्दै गर्दा अन्यथा गतिविधिहरु पनि हुन सक्लान् । त्यसैले हामीले कहिल्यै पनि कसैको बहकाउ वा हुलको पछि लाग्नुभन्दा पनि के का लागि हुल बन्दैछ र त्यसले राज्य र राज्यको कानुनलाई असर गर्छ वा गर्दैन त्यो भने बुझ्नुपक्कै पनि पर्छ ।
एकजना पत्रकारले आत्महत्या गरे र त्यो अवस्था सिर्जना हुनुमा अर्का सञ्चारसँग आबद्ध व्यक्तिहरुकै नाम लिएपछि परिवारले किटानी जाहेरी दियो । जब परिवारले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने यस्ता व्यक्तिहरु हुन् र यिनीहरुकै कारणले गर्दा मेरो मानिसले मृत्युलाई रोज्यो भन्दै उजुरी दिएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतबाट अनुमति लिएर गिरफ्तार गरी अनुसन्धान गर्नु राज्यका नियकायको दायित्व हो । त्यही दायित्व पुरा गर्नका लागि प्रहरी सक्रिय हुन्छ । २०७५ भदौ १ गते देखि लागू भएको मुलुकी संहिता अनुसार प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नुपूर्व अदालतको अनुमति लिनैपर्छ । अदालतबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी नगरेसम्म कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न नपाइने प्रावधान भएको कारणले गर्दा यदी प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गरेको छ भने त्यो मुद्दा अदालत पुगेको छ भन्ने पक्का हो । मुलुकी संहिता ऐनको दफा १८५ मा उल्लेख भए अनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।
आखिर किन आन्दोलन त भन्ने प्रसंग पक्कै पनि उठ्छ । कुनै पनि सकारात्मक कुरा अनि सही चिजको मृत्यु नहोस भन्नका लागि नै आन्दोलनका कदम चालिन्छन् । तर कोही कसैले भनेकै आधारमा अरुलाई तल पार्नकै लागि मात्र पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । संसारको सृष्टिमा मानव जातिलाई निकै उत्कृष्ट एवं सुझबुझ भएको भनेर भगवानले सृष्टि गर्नुभयो भन्दै गर्दा हामीहरु कोही कसैको निहित स्वार्थ र भावनामा किन बग्दैछौं ? अदालतले अनुसन्धान गर्दै गरेको प्रसंगमा किन हामी भीड जम्मा गरेर उफ्रन्छौं ? विश्वकै अभ्यास भनेको अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कुनै पनि प्रसंगमा बोल्नु अदालतको मानहानी हो । त्यस्तो प्रकृतिको घटनामा हामीले भीड जम्मा गरेर के जितौंला ? त्यसैले एकपटक आफ्नै मूल्याकंन गर्ने पो हो की ।